Dr. Tint Swe – Page4– Healthy Life Journal
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ကျွန်တော့်မှာ လက်တုန်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ၁၉ နှစ်သားလောက်မှာ စတင်သတိထားမိလာတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော့်အသက်က ၂၉ နှစ်ပါ။ မိဘဆွေမျိုးတွေမှာလည်း ဒီလိုမရှိပါဘူး။ အရင်က ဘာမှမဖြစ်သလို အရေးမကြီးသလို နေခဲ့ပေမယ့် အခုဓာတ်ပုံရိုက်တော့ လက်ကတုန်နေတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး...
ခွဲစိတ်ထားပြီးသူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (Exercise after Surgery)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ဆရာရှင့် ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေးမွေးထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန်လောက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ဝိတ်ချတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချနိုင်ပါမလဲ။ အခု ဒုတိယကလေးကို ခွဲမွေးတာ အတွင်းအနာက အခု ၂ လခွဲအထိ သိပ်မကျက်ချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ကျောက်ကပ်အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါဆရာ။ သူ့ကျောက် ကပ်က efficiency ကျနေပြီး၊ ဆရာဝန်က ကျောက်ကပ်သက်တမ်းက နောက် ၁၀ နှစ်လောက်ထိပဲ ရတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အိမ်လည်းမပြောဘူး၊ ဆေးလည်းမကုဘူး...
Dexamethasone proves first life-saving drug ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအတွက် အသက်ကယ်ဆေး
——–၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——– ၁၆-၆-၂၀၂၀ နေ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံမှာ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်သူတွေကို ကုသပေးရာမှာသုံးတာ အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်ရှူစက်တပ်ထားရသူတွေကို ဆေးပေးပါတယ်။ ဆေးအလေးချိန်လည်း နည်းနည်းသာပေးရတယ်။ ဆေးက ဈေးလည်းမကြီးပါ။ သေဆုံးမှု ၃ ပုံ ၁...
အူအတက်ရောင်တာ မခွဲဘဲရသလား (Appendicitis treatment with Antibiotics)
——-၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——- သမီးက (—)မြို့မှာ နေပါတယ်။ အသက်က (၂၅) နှစ်၊ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ဒီရက်ပိုင်း ဗိုက်အောင့်ပါတယ်။ ၄ ရက်လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ ပထမစအောင့်တဲ့ရက်က ရင်ညွန့်က အောင့်တာပါ။ နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ပါတယ်။ လေထိုးလို့အောင့်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊...
အအန်ပျောက်ဆေးများ (Anti Emetics)
……………..၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊……………. ပျို့ချင်-အန်ချင် ဖြစ်သည်မှာ လက္ခဏာတခု ဖြစ်သည်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်စေပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်၊ ခရီးသွားစဉ်၊ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်စဉ် အန်ခြင်းတို့အပြင် အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်ရောဂါများ၊ အစားအလွန်အကျွံစားခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဦးခေါင်းအားထိခိုက်မိခြင်း၊ ဦးနှောက်ထဲအကျိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း၊ အစာအိမ်လေနာ၊...
အိပ်ပျော်ရင် သွားရည်ကျတာ (Drooling During Sleep)
————-၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊————- အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သွားရည်ကျတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာချို့ယွင်းမှုများရှိလို့ ကျတာပါလဲ။ သွားခေါတာနဲ့ ဆိုင်ပါသလား။ အသက် ၂၃ နှစ်လည်းရှိပါပြီ။ ဒီအရွယ်ထိ အိပ်ရင် သွားရည်ကျနေတာ သတိမရှိလို့လား။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားတာလဲ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး...
———-၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊———– (ကန်တော့) ၁။ မင်္ဂလာပါဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၀ ပါ အပျိုပါ။ ရင်သားအောက်ဘက်နားမှာ အကျိတ်တွေ့လို့ပါရှင့်။ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ရိုးရိုးအကျိတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ခွဲခြားပြီး ပြောပြပေးပါရှင့်။ သိတာ ၂ရက်ရှိပါပြီ။ ၂။ ရိုသေစွာဖြင့် မေးမြန်းပါသည်ဆရာရှင့်။...
——-၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊——– အမည် ( )၊ အသက် ၅၀၊ ကျား၊ ရန်ကုန်။ ကျွန်တော် ခါးနည်းနည်းအောင့်တာကြောင့် ဆရာဝန်ကိုသွားပြတော့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တာ ကျောရိုးမှာ အရိုးအတက်ထွက်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် ဘာရောဂါကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆရာ။ ဘာဆေးတွေက ထိရောက်အောင် ကုသပေးနိုင်ပါသလဲ။Cervical...
ကိုယ်အပြင်မှာ HIV ဘယ်လောက်ကြာရှင်သလဲ (HIV survival outside the body)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေ ထွက်လာရင် ရောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရှင်သန်နိုင်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ရက်သတ္တပါတ်တွေအထိ ရှင်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ဒီလောက်ကြာကြာ မရှင်နိုင်ပါ။ သူတို့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းဟာ ကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ အရည်တွေအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အရည်ထုထည် ဘယ်လောက်များသလည်း။ အရည်ရဲ့အပူချိန်၊...